Yakaomeswa dhaka chirimwa, Kufananidza michina, PC Midziyo - Shantui
Zvimiro 1.Convenient gungano uye disassembly, yakakwira kufamba kweshanduko, iri nyore uye inokurumidza, uye yakakwana basa saiti chinja. 2.Compact uye inonzwisisika dhizaini, yakakwira modularity dhizaini; Iko kushanda kuri pachena uye mashandiro acho akatsiga. 4.Less kugara kwebasa, kwakakura kugadzirwa; 5.Iyo magetsi system uye gasi system yakashongedzwa nepamusoro-magumo uye yakakwirira kuvimbika. Iyo nharembozha kongiri yekudyara chirimwa kongiri yekugadzira michina inosanganisa iyo yekuchengetedza zvinhu, uremu ...
Zvimiro 1.Convenient gungano uye disassembly, yakakwira kufamba kweshanduko, iri nyore uye inokurumidza, uye yakakwana basa saiti chinja. 2.Compact uye inonzwisisika dhizaini, yakakwira modularity dhizaini; Iko kushanda kuri pachena uye mashandiro acho akatsiga. 4.Less kugara kwebasa, kwakakura kugadzirwa; 5.Iyo magetsi system uye gasi system yakashongedzwa nepamusoro-magumo uye yakakwirira kuvimbika. Tsanangudzo Mamiriro SjHZS025Y SjHZS040Y SjHZS050Y SjHZS075Y Dzidziso yekugadzira m³ / h 25 40 50 ...
Zvimiro 1. Nheyo yemahara dhizaini, iyo michina inogona kuiswa yekugadzira mushure mekunge nzvimbo saiti yaiswa uye yaomeswa. Kwete kwete chete kudzikisa hwaro hwekuvaka, asiwo kupfupisa iyo yekumisikidza kutenderera. 2.Iyo modular dhizaini yechigadzirwa inoita kuti ive nyore uye nekukurumidza kubvarura nekutakura. 3.Compact compact mamiriro, pasi pebasa. Tsananguro Mode SjHZN025F SjHZN040F SjHZN050F SjHZN075F SjHZS050F SjHZS075F SjHZS100F SjHZS150F The ...
Zvimiro Chigadzirwa chinoumbwa ne batching system, kuyera system, kusanganisa system, yemagetsi control system, pneumatic control system uye nezvimwe zviyero, hupfu, mvura yekuwedzera uye mvura inogona kungoerekana yakwidzwa uye yakasanganiswa nemuti. Aggregates akaiswa kune akaunganidzwa bin nemutariri wepamberi. Upfu hunoburitswa kubva paShiro kuita huremu hwechiyero ne Screw conveyor .Mvura uye mvura yekuwedzera inowedzerwa pachikero. Ese masisitimu ekuyera zviyero zvemagetsi. Miti yacho inongoerekana yaitika ...
Shantui Janeoo Machinery Co., Ltd. ndiyo yekutanga kugadzirwa kwekongiri yekusanganisa uye yekufambisa michina yemakambani makuru ehurumende-anemabhizimusi akakosha, ndiyo CREC, CRC pamusoro pemakore ekuronga mudiwa, iyo huru kongiri yekusanganisa chirimwa, asphalt kusanganisa chirimwa, yakaoma kusanganisa Duri chirimwa, bhizimusi repamusoro-soro rakasanganiswa chirimwa, pombi yekukweva, midziyo yekurasa marara uye akasiyana ma mixers.
Kushanda kwe sjhzs75-3e kongiri inosanganisa michina kuMyanmar vatengi vatengi kuvaka
Nguva yekuvaka: Gumiguru 2020 Chikamu chekushandisa (rudzi rweinjiniya): yekuvaka yemadhorobha Midziyo mhando: kongiri yekusanganisa michina Kunyorera: Musi waGumiguru 9, 2020, mushure memazuva mazhinji ekumisikidza kure uye nhungamiro, Shantui Janeoo Marine SjHZS75-3E kongiri michina yekusanganisa inobudirira kuumbana .. .
Nguva yekuvaka: Nyamavhuvhu 2020 Yekunyorera munda (enjiniya mhando): zvekurima, masango uye mvura yekuchengetedza mhando mhando: kongiri yekusanganisa michina SjHZS90-3B simende silo ndeye mutengi wekare silo. Kushanda: MunaGunyana 2020, iwo maviri SjHZS090-3B kongiri batching zvirimwa zveShantui J ...
Shantui Janeoo marine kongiri inosanganisa chirimwa SjHZS75-3E yakabudirira kupedzisa inorema kugadzirwa kwemitoro muna Gumiguru 9,2020.Munguva yemazuva mazhinji ekutungamira kure, inovhura mugwagwa wekugadzira kukosha kwevatengi veMyanmar. Inobatwa nedenda mamiriro, iye anotevera-kutengesa seinjiniya haakwanise kuenda ku ...
Shantui Janeoo anowana kutengeswa kwemahombekombe kune dzimwe nyika kwezvose zviri zviviri batching zvirimwa uye marori emisanganiswa
Munguva pfupi yapfuura, Shantui Janeoo 2XSjHZS120-3B kongiri batching chirimwa uye gumi seti e12-mativi-mita mita kongiri musanganisi marori akatumirwa zvinobudirira kuPhilippines, uye rwendo rwekubatsira kubatsira kuvaka chirongwa cheMetro Manila richakurumidza kutanga. Panzvimbo yekuendesa, nhengo dzevakapedza ...
Shantui Janeoo services Shiheng Canggang njanji yekuvaka chirongwa
Munguva pfupi yapfuura, maseti matanhatu eSjHZS240-3R kongiri yekusanganisa simiti inoshandiswa neShantui Janeoo yekuvaka Shiheng-Canggang Intercity Railway yakaiswa uye yakabudirira kuendeswa kune vatengi. Yese michina inotora iyo jira simenti silo chimiro, uye yega michina yakagadzirirwa ...